Ingqungquthela ye-StreamGeek iqondiswe eNew York City - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - NAB Show LIVE
Ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » Ingqungquthela ye-StreamGeek iqondiswe eNew York City
Ingqungquthela ye-StreamGeek iqondiswe eNew York City
NguPaul Richards, Isikhulu Esiphezulu Sokusakaza, i-StreamGeeks
Isazi sokuzivocavoca segolide se-Olimpiki esiyiNadia Comăneci sike sathi: "Jabulela loluhambo futhi uzame ukuba ngcono nsuku zonke, futhi ungalahli umdlandla nothando lwalokho okwenzayo." Lawo mazwi abe nokuvumelana nami ohambweni lwami selokhu asungulwa. ama-StreamGeeks e-2017.
NgoNovemba lo, amaSkyGeeks azobe ephethe ingqungquthela yokuqala yokusakazwa bukhoma kwayo ngo-NYC. Lolu suku oluphelele lwemfundo yokusakaza bukhoma luzohlanganisa ndawonye izingqondo eziphezulu embonini yokukhiqiza ama-video nomkhakha wezentengiso ukuxoxa ngekusasa lokusakazwa kwabezindaba. Kepha linda, angobani ama-StreamGeeks? Yini i-heck laba bantu abayaziyo ngokusakazwa bukhoma?
Lapho ngiqala ukusakaza bukhoma e-2015, ngenza cishe wonke amaphutha. Ngemuva kwesikhathi sonyaka, kukhiqizwe ukusakazwa okubukhoma ku-YouTube, inkampani yethu iqale ukubona ukuphakama okukhulu ekuthengisweni nasekuvezeni i-intanethi. Kusebenzisa kwethu Ama-PTZOptics amakhamera okusakaza bukhoma, ngithole i-groove, futhi ngaqala ukwakha ababukeli abazinikezele. Akubanga isikhathi eside ngize ngilethe umhlanganyeli futhi ekugcineni umkhiqizi wesikhathi esigcwele. Ngesikhathi i-Facebook Live iqala ukusebenza e-2016, iqembu lethu nokusakazwa kwethu bukhoma kwaqala ukuthola ukuthambekela okwengeziwe nezithameli emhlabeni jikelele. Sasisakaza ku-YouTube naku-Facebook njalo ngoLwesihlanu. Ukusakaza esikhiqizile bekuqinisile, futhi sazibandakanya nezithameli zethu ngokubakhombisa ukuthi ukusakaza bukhoma akuyona imikhiqizo engenaphutha. Njengoba isikhathi siqhubeka, saba ngabachwepheshe emkhakheni futhi sabelana ngalolo lwazi nabalandeli bethu abalandelayo. Ngalesi sikhathi, nginqume ukubhala le ncwadi “ Ukusakazwa bukhoma kungukuMaketha oku-Smart. ”Kwakuwumvuthwandaba womsebenzi esasiwenzile, okubonisa ukuhamba kwethu ngendlela futhi ekhombise abanye ukuthi nabo, bangaxhumana nezithameli futhi bakhe izinhlobo zabo ngevidiyo ebukhoma. Sithathe abafundi ngokusebenzisa isisetshenziswa sethu semishini yokusakaza bukhoma ngoba empeleni besifuna ukunika lolu lwazi nobuchwepheshe kwabanye. Sisize amabhizinisi endawo eChester County, ePa., Ukukhiqiza ukusakazwa kwabo kokuqala. Sakhiqiza futhi sabamba ngokubambisana ukusakaza bukhoma ukusiza imali engenzi indawo ukukhulisa imali yezisulu zobugebengu obunobudlova, futhi saphinde sakhiqiza ukusakazwa bukhoma kwesiteshi somsakazo sendawo, somphakathi. Lokhu okuhlangenwe nakho kusiholele ezikhathini ezifundekayo zezilaleli zethu. Siwabelane ngakho konke nabo, ukusuka embukisweni wangaphambi kombukiso nangemuva kokumisa amakhamera ethu ukuthumela imibukiso esiteshini sethu se-podcast lapho sasisabalalisa khona konke esikwenzile. Le nqubo yaba ngumkhiqizo ogcwele ngokugcwele futhi yavumela ababukeli bethu ukuba babe yingxenye yezinyathelo zonke.
Lokhu kusiholele emcabangweni wokwenza ingqungquthela yomuntu siqu. Ngicabange okuthile okuncane okuqhamuka kwimibukiso ejwayelekile yokuhweba, ngamathuba wababekhona ukwenza ukuxhumana kwangempela futhi bathole imininingwane ebalulekile. Ukusuka kulokhu, i I-BroadGeeks Summit wazalwa.
NgoNov. 8 e- Iphupho yedolobha e-Chelsea, iqembu lami nami sibamba usuku lonke lwemfundo yokusakaza bukhoma. Ukusuka ku-8 am ukuya ku-5 pm, ababekhona bazokwazi ukuxhumana nge-bukhoma
ukusakaza ochwepheshe nama-amesha abheke ukwengeza ukusakazwa bukhoma kumabhizinisi abo. Ngiyaziqhenya ukusho ukuthi kuzoba ingqungquthela yokuqala yohlobo lwaso ogwini olusempumalanga, futhi sizibophezele ukuyenza isipiliyoni esimnandi.
Isikhulumi senkulumo yeSummGeeks Summit kuzoba nguGeoffrey Colon, inhloko yeMicrosoft Advertising Brand Studio nombhali we- "Marketing Disrupttive." Uzogxila enkulumweni yakhe emandleni wokusakazwa bukhoma kanye nethonya labo kucebo lomkhiqizo, i-podcasting, imboni yezokudlala, imboni yomculo bukhoma, kanye nemidlalo. UChris Packard uzokhuluma ngesikhulumi sakamuva sokusakazwa bukhoma, iLinkedIn Live. Bobabili bazojoyinwa yi-CEOs, abaholi abacabangayo kanye nochwepheshe embonini.
Ngaphezu kwengqungquthela yokusebenzela kanye namaphaneli, kuzoba nokwamukelwa okungafani ne-VIP ngoLwesine. Isazi sokusakaza esijikelezayo esiseNew York City esasungula i-Urbanist sizonikeza lo mbukiso wesifunda sokupaka inyama, sonke ngenkathi kusakazwa bukhoma!
Ngakho-ke uma ukwazi ukukhipha usuku lokufunda bukhoma nokusakazwa kwemfundo yokuxhumana, sihlangane nathi e-Dream Downtown Nov. 8. Amanani amathikithi wosuku lonke angama- $ 295 kuphela. Isidlo sasemini sizofakwa. Thola amathikithi akho maduze ngoba umcimbi uboshwe kumakhonsathi we250. Amathikithi angama-Virtual ayatholakala, futhi amathikithi we-premium azokuvumela ukuthi ufinyelele okurekhodiwe kuwo wonke ama-workshop.
Ngiyethemba ukukubona ku-Big Apple, futhi!
UPaul uyisikhulu Esiphezulu Sokusakaza ku-StreamGeeks futhi umbhali we- "Ukusakaza bukhoma yi-Smart Marketing." AbakwaRichards bafundisa izitshudeni ze-20,000 ku-UDEMY ekukhiqizweni kwamavidiyo bukhoma, ukusakazwa kweselula, nokuningi. URichards usingethe uhlelo olusemthethweni lweNAB (National Association of Broadcasters) eLas Vegas futhi uyaqhubeka nokuba ngumholi ocabangayo embonini.
i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa komsindo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw Ama-spears nama-Arrows I-Ultra HD Forum	2019-10-01
Ngaphambilini: I-Lectrosonics Venue2 Receiver System Manje Iyatholakala ku-941-960 MHz Band
Olandelayo: Ukuphakanyiswa Kwezigaba Zobuciko Kwamenyezelwa Imiklomelo ye-2019 HPA